I-PEPTIDE Archives - i-Shangke Chemical
1. Yintoni i-Enfuvirtide? 2. Indlela yokusebenza ye-Enfuvirtide? 3. Ukusetyenziswa kwe-enfuvirtide kwi-HIV 4. Ungayisebenzisa njani i-enfuvirtide powder? 5. Idosi ye-Enfuvirtide? 6. Ziyintoni iziphumo ze-enfuvirtide? 7. Igcinwe njani i-enfuvirtide powder? 8. Olunye uphando kunye nokusetyenziswa kwe-Enfuvirtide powder 1. Yintoni i-Enfuvirtide? I-Enfuvirtide (159519-65-0) luhlobo lwepeptide esetyenziswa ...
1. Yintoni iLinaclotide (iLinzess)? 2. I-Linaclotide isetyenziselwa ntoni? 3. Yintoni indlela yokusebenza kweLinaclotide? 4. I-Linaclotide mayisetyenziswe njani? 5.Yithini ithamo yeLinaclotide (iLinzess)? 6. Iziphumo ezinokubangelwa yintoni i-Linaclotide? 7. Zeziphi iziyobisi okanye izongezo eziza kudibana neLinaclotide? 8. Uyintoni umahluko phakathi kweLinaclotide kunye ne-lubiprostone? 9 ....
1. I-Liraglutide 2. Isakhiwo se-Liraglutide 3. Isibonakaliso se-Liraglutide 4. Indlela yokusebenza ye-Liraglutide 5. I-Dosage and Instruction Institutionions of Liraglutide 6. Zeziphi izibonelelo zeLiraglutide? 7. Kuya kufuneka ukhathalele ezi ziphumo zilandelayo / isilumkiso xa usebenzisa i-Liraglutide 8. Ukusebenzisana kweLiraglutide 9. Amava ezonyango 10. Ukuqukumbela ...
1. Yintoni uDegarelix? 2.Yintoni umgubo kaDegarelix osetyenziselwa? 3. I-Degarelix powder Mechanism of Action 4. Ukusebenzisana kwe-Degarelix 5. Ngaba ukhona umngcipheko ukuba ndiphosile idosi ye-Degarelix okanye i-overdose? 6. Zeziphi Iziphumo zeSide kunye nezilumkiso ezinokuthi zibangele uDegarelix? 7. Ukuqukumbela 8. Ulwazi olongezelelekileyo lokuBhala ngokuBhala, umhlaza wesibindi uye waba sesinye sezifo ezisongela ...
Yonke into malunga ne-Hexarelin 1. I-Hexarelin Imbali kunye nokujonga ngokubanzi 2. I-Hexarelin Properties kunye nendlela esebenza ngayo 3. I-Hexarelin Iziphumo 4 ze-Hexarelin Iziphumo 5. I-Hexarelin Sebenzisa 6. Thenga i-Peptide Hexarelin kwi-intanethi 1. I-Hexarelin Imbali kunye ne-Overview Peptide Hexarelin yihormon ekhulayo uninzi lubizwa ngokuba yi-Examorelin. Ichiza lelokwindawo egcina izinto ezifihlakeleyo okanye ze-GHSR zeholide zokukhula ....
1. Yintoni Alarelin? 2. I-Mechanism of Action 3. Ukusetyenziswa kwe-Alarelin 4. Ukusetyenziswa kwe-Alarelin ekubhekiswa kuyo 5. Izibonelelo ze-Alarelin 6. Iziphumo ezibi ze-Alarelin 7. Imeko yokuGcina imeko ye-Alarelin 1. Yintoni uAlarelin? I-Gonadotrophin-ekhupha i-hormone (i-Alarelin) inokuchazwa njenge-agonist yophando ye-LR-RH, esebenza ngokuvuselela ukuvelisa kunye nokukhululwa kwe-LH kunye ne-FSH kwimisipha yakho yasesidlangalaleni ....